कसको काँधमा जाला विपीको विरासत ? - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
कसको काँधमा जाला विपीको विरासत ?
August 2, 2020 मा प्रकाशित (१ महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
कांग्रेसमा यस पटक खुलेरै देउवाको विकल्प खोजिएकाे हो ?
साउन, काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादमा छट्पटाइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने आउँदो फागुनमा हुन गइरहेको १४औं महाधिवेशनको तयारीमा छ ।
१४ औं महाधिवेशनका कार्यक्रमहरु चलिरहेका छन् । र, १४ औं महाधिवेशन पछि पार्टीलाई कसले कसरी नेतृत्व गर्ला ? के आउँदो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गुमेको विरासत फिर्ता ल्याउला अथवा, विपी कोइरालाले रोपेको कांग्रेसको नीति तथा सिद्धान्त पुर्नजिवित होला ?
पार्टीभित्र मात्र हैन कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका हरुविचपनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कांग्रेसको महाधिवेशन तर्फ सबैभन्दा बढि चिन्ता कम्युनिस्टहरुलाई छ, किनभने बर्तमान कांग्रेस नेतृत्वको कारण कांग्रेसले लय गुमाएको कम्युनिस्टहरुको बुझाई छ ।
हुन पनि हो, बर्तमान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७४ सालको आम निर्वाचनमा पार्टीलाई जनताका माझ घनिभूत रुपमा पुर्याउन नसक्दा कम्युनिस्टहरुले भोट बटुले । सोझो अर्थमा भन्ने हो भने, कांग्रेस नेतृत्वले आम जनतालाई आफ्ना एजेण्डाहरु प्रष्ट रुपमा बुझाउन नसक्दा कमजोर हुनु पर्यो ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पनि यो कुरा स्विकार गरेको छ । अबको १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसलाई देशकै पहिलो पार्टीको रुपमा उभ्याउन सक्ने क्षमता भएको नेतृत्वको माग भएको छ । र, सोहि अनुसार आगामी फागुनबाट विपी कोइरालाको विरासत जोगाउने भन्दै सभापतिको दौडमा आधा दर्जन आकांक्षीहरु लागेका छन् ।
“कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पुनः एक पटक सभापतिमा दोहोरिने मनस्थितिमा छन् । उनले पटकपटक एक कार्यकाल सभापति खाने बताइसकेका छन् र, उनको पछिल्लो गतिविधिले पनि त्यहि संकेत गर्दैछ” ।
अहिले देउवा पावरमा रहेकाले पार्टीभित्रका रिक्त रहेका पदहरुमा र भातृ संगठनहरुमा धमाधम आफ्ना नातागोता पर्ने कार्यकर्तालाई भर्ति गराइरहेका छन् ।
केहि दिन अगाडी मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापालाई कांग्रेसमा प्रवेश गराए । राप्रपा त्यागेर कांग्रेसमा आएका थापालाई कांग्रेसीले नै रुचाएनन् । लगत्तै देउवाले ९ वटा भातृ संगठनहरुको ६ महिना म्याद थप गरे । १४ औं महाधिवेशनको कार्यक्रम चलिरहँदा सभापति देउवाले हतारहतार एकपछि अर्को निर्णय गर्दा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आपत्ति जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन नै गरे ।
पार्टीमा देउवालाई सहयोग गर्नेहरुमा उपाध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, मीन विश्वकर्मा, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा लगायत छन् । देउवाको कार्यशैलीबाट केन्द्र, जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै असन्तुष्ठ पक्षहरु रहेका छन् । खासगरी पछिल्लो समय, विवादित एमसीसी प्रकरण, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, ओम्नी समुह प्रकरण लगायतमा देउवाको मौनताले राष्ट्रिय राजनीति नै प्रभावित भएको छ ।
उनलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता धरापमा पार्न खोजेको आरोप छ । कांग्रेस सभापतिको दौडमा रहेकाहरुमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष देउवाका मुख्य प्रतिष्पर्धी हुन् । देउवाका गलत कृयाकलापविरुद्ध पछिल्लो समय खुलेर बोल्न थालेका पौडेल एक्लैले सभापतिको दावेदारी गरेका हैनन् ।
उनको पक्षमा रहेका डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री शशांक कोइराला, कृष्ण सिटौला सभापतिका आकांक्षी हुन् । तर, यि मध्ये पौडेल क्याम्पका बलिया प्रतिष्पर्धी भनेका डा. शेखर कोइराला हुन् ।
“१३ औं महाधिवेशनमा पनि सर्वाधिक लोकप्रिय मत ल्याएर विजयी भएका डा. शेखर कांग्रेसी कार्यकर्ता माझ मात्र हैन आम जनताविच पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् “।
स्रोतका अनुसार शेखरलाई सभापति बनाउन सुजता, शशांकको सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसको गुमेको विरासत जोगाउनकै लागि भएपनि शेखरलाई ल्याउनु पर्छ भन्नेहरु छन् । त्यसो त शेखरलाई दृढ निर्णय गर्न नसक्ने नेताका रुपमा पनि अर्थयाउने गरीएको छ ।
१३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री हुने अवसर रहँदा रहँदै शेखर ब्याक भएको आरोप छ । साथै उनलाई विपी कोइरालाको दम्भ बोकेको नेता भन्नेहरु पनि छन् ।
तर, पछिल्लो समय उनी जनस्तरमै गएर कार्यकर्ताहरुसँग घुलमिल भएकाले लोकप्रियता बढेको छ । उनले लामो समयदेखि पार्टी सुदृढिकरण अभियान चलाइरहेका छन् । कोरोना महामारी शुरु भइरहँदा पनि उनी जिल्ला दौडमा थिए । उनको जिल्ला दौडले त्यत्ति खेरै आगामी पार्टी सभापतिको दौडको रुपमा बुझिएको थियो ।
संभवतः पौडेल क्याम्पबाट रामचन्द्र, शशांक, शेखर मध्येबाट एक जना सभापतिको साझा उम्मेद्वार हुनेछ । सभापतिको आकांक्षा पाल्नेहरुमा काठमाडौंका रैथाने अर्जुननरसिंह केसी पनि हुन् । उनलाई काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङतिरबाट सभापतिमा उठ्नुपर्छ भन्नेहरु छन् ।
यद्यपि, पार्टीमा उनलाई गगन थापाले नै काउन्टर दिने अवस्था छ । गगन थापा यसपटक महामन्त्रीको शशक्त दावेदार हुन् । पार्टीमा कृष्ण सिटौला अर्का सभापतिका आकांक्षी हुन् । खुलेर भन्न नकसेपनि सिटौलाले भित्रभित्रै आफ्नो सञ्जाल बनाइरहेका छन् । क्षेत्रिय र जिल्लागत रुपमा उनले आफ्ना पक्षकालाई निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्वमहामन्त्री समेत रहिसकेका सिटौलाले आफ्नो सम्पर्क कार्यालय खोलेरै सक्रियता बढाएका छन् । सभापतिका अर्का दावेदार हुन् पूर्वसहमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह ।
“उनले भित्रभित्रै सभापतिको दावेदारी बढाइरहेका छन् । उनले कोरोना संक्रमण शुरु हुनै लाग्दा ७७ वटै जिल्लाको भ्रमण गरेर सभापतिमा उठ्ने संकेत दिएका थिए “।
अहिले उनको निवासमा साँझ विहान कार्यकर्ताहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । उनले बर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुरलाई असफल सभापति भनिसकेका छन् ।
अहिले कांग्रेसभित्र कृयाशिल सदस्यता वितरणको काम धमाधम भइरहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएपछि मात्रै सबैले आ–आफ्नो दावेदारी अगाडी सार्ने रणनीति बनाएका छन् ।
अहिले नै उम्मेद्वारी सार्वजनिक गर्दा प्रतिष्पर्धीले चलखेल गर्ने ठाउँ पाउने भएकोले कसैले खुलेर बोलेका छैनन् । तर, आ–आफ्ना पक्षका नेता कार्यकर्ताबाट बोलाउने गरेका छन् ।
यति चैं होकि, कांग्रेसमा यसपटक खुलेरै देउवाको विकल्प खोजिएको छ । देउवाले पार्टीलाई रसातलमै पुर्याएको भन्दै नेताहरुले उनलाई राजनीतिबाट सन्यास नै लिनुपर्ने सम्म भनेका छन् ।
पार्टीका दोस्रो दर्जाका नेताहरुले भने जो आएपनि विपीको सिद्धान्तलाई संरक्षण गरेर लैजानु पर्नेमा छन् । कांग्रेस पार्टी पत्तासाफ हुनुमा विपीको सिद्धान्त र लिगेसी कुल्चिएकाले हो भन्नेहरु छन् ।@मकालु खबर